Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo dhoolatus sameeyay - BBC News Somali
Image caption Dhoolatus ay sannadkan horraantiisii sameeyeen ciidammada Maraykanka iyo kuwa Kuuriyada Waqooyi
Ciidammada Maraykanka iyo Kuuiyada Koonfureed ayaa samaynaya dhoolatus milatari kaas oo si joogto ah uga caraysiiya xukuumadda Pyongyang.
Ciidammada labadaasi dal ayaa dhaga ka furaystay dalabyo loo soo jeediyay oo ku aadanaa in ay hakiyaan.
Todobaadkii hore ayay Kuuriyada Waqooyi u muuqatay in ay ka laabatay hanjabaad ay ku sheegtay in ay gantaallo ugu ridi doonto jasiiradda uu Maraykanka leeyahay ee Guam oo ku taalla badda Baasifigga, laakiin waxay sheegtay in ay isha ku hayndoonto ficillada Maraykanka.
Haddana waxay cambaaraysay dhoolatuskan milatari.
Laakiin Maraykanka ayaa sheegay in dhoolatuskan uu yahay in mid difaac, balse Kuuriyada Waqooyi ayaa u aragta mid loogu diyaargaroobayo in lagu qabsado.
Shiinaha iyo Ruushka ayaa bishii Luulyo soo bandhigay in la hakiyo dhoolatuska milatari si Kuuriyada Waqooyi loogaga badhasho in ay joojiyaan tijaabinta gantaallada riddada dheer.
Image caption Dhoolatus lagu qabtay magaalada Seoul oo lagu soo bandhigayo wixii la samayn lahaa haddii argagixiso weerarto khadadka tareenka ee dhulka hoostiisa mara
Laakiin taliyeyaasha ciidammada Maraykanka ayaa toddobaadkii hore sheegay in dhoolatuskan uusan saarnayn miiska wadaxaajoogka uuna u dhici doono sidii horayba loogu qorsheeyay.
Maraykanka ayaa sheegay in dhoolatuskaas ay ka qaybqaadan doonaan 17,500 oo ka mid ah ciidammada Maraykanka.
Dhoolatuskan ayaa lagu wadaa in uu socdo ilaa toban maalmood.
Laakiin iyadoo Waqooyiga Kuuriya ay ku hanjabtay in ay gantaallo ku garaaaci doonto jasiiradda Guam, labada dalna uu dhawaan dhexmaray dagaal afka ah oo salka ku haya gantaallada ay tijaabiso xukuumadda Pyongyang, ayaa dadka wax falanqeeya waxay sheegayaan in dhoolatuskan loo arki karo mid daandaansi ah, maadaama oo xilli xasaasi ah lagu jiro.
Image caption Gurmadka caafimaadka ayaa ka mid ah dhoolatuska
Axaddii wargayska ay dawladda Kuuriyada Waqooyi leedahay ee Rodong Sinmun ayaa sheegay in dhoolatuskani uu uga sii dari karo xaaladda gacanka Kuuriya, wuxuuna ka digay "in uu yeesho waji aan la kontorooli karin oo dagaal nukliyeer ah".
Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sannad kaste qabta labo dhoolatus, kaas oo ay ka qaybqaataan ciidammo aad u badan iyo agabyo milatari oo badan.
Image caption Toddobaadkan waxaa dhoolatuskan ka mudaaharaaday mucaaradka Kuuriyada Koonfureed oo uu ka mid yihay xisbiga UFG
Labadaas dhoolatusba waxaa laga sameeyaa dhulka, badda iyo hawadaba, sanadihii u dambeeyayna waxaa diiradda lagu saarayay weerarrada argagixisada iyo hubka kiimikada ah.
Inta badan Kuuriyada Koonfureed waxaa uga qaybqaata 50,000 oo askari halka Maraykanka ay uga qayb galaan 25,000 ilaa 30,000 oo askari.
Mararka qaarkoodna waxaa ka qayb gala dalalka ay xulafada yihiin, tusaale ahaan midkii sannadkii hore la qabtay ee UFG waxaa ka qaybqaatay sagaal dal oo kale.